တရုတ် Audi က Android ကား DVD, Audi A3 ကို Android မော်တော်ကား DVD, Audi TT အန်းဒရွိုက်ကား DVD စက်ရုံစီး
ဖေါ်ပြချက်:Audi ရဲ့အန်းဒရွိုက်ကား DVD,Audi A3 ကို Android မော်တော်ကား DVD,Audi TT အန်းဒရွိုက်ကား DVD,Audi A4 အန်းဒရွိုက်ကား DVD,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Audi ရဲ့အန်းဒရွိုက်ကား DVD Player ကို
Audi ရဲ့အန်းဒရွိုက်ကား DVD Player ကို ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Audi ရဲ့အန်းဒရွိုက်ကား DVD, Audi A3 ကို Android မော်တော်ကား DVD ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Audi TT အန်းဒရွိုက်ကား DVD R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
A4L 2017-2019 ၁၀.၂၅ လက်မ Android9Car Radio  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Audi TT ကို Android system ကို ဦး ခေါင်းယူနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Audi A4 android9ကားရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Audi A3 အတွက် Android ကား DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
A4 အတွက် Din Android 9.0 Car Stereo ကိုနှစ်ဆတိုးနိုင်သည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
A3 အတွက် Android Infotainment System Car Stereo  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
A3 ကားကိုအော်တိုမာလ်တီမီဒီယာ DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
A4 ကားတစ်စီးအော်တိုမာလ်တီမီဒီယာ DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Audi A4 2002-2008 ဘို့ဟာ android ကားတစ်စီးအသံဖိုင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Audi A3 2006-2013 များအတွက် 2din ကားတစ်စီးအသံဖိုင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Audi A3 များအတွက် Android မှာ 8.0 ကားတစ်စီးစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Audi TT 2006-2013 များအတွက် oem မာလ်တီမီဒီယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Audi A4 2002-2008 များအတွက် oem ရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Audi A3 2003-2013 ဘို့ကားတစ်စီးရေဒီယိုခေါင်းကိုယူနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
octa Core 2GB RAM ကို 16GB ROM ကို Audi A3  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
octa Core 2GB RAM ကို 16GB ROM ကို Audi A4  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Audi A4 သည်ကားတစ်စီးကို DVD Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အန်းဒရွိုက် 7.1 Audi TT မာလ်တီမီဒီယာစနစ်များ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အန်းဒရွိုက် 7.1 Audi A4 ကားအသံ Navigation  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Audi TT 2006-2013 ကားကို DVD Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Audi TT7လက်မကားအသံအီလက်ထရောနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
A4L 2017-2019 ၁၀.၂၅ လက်မ Android9Car Radio
A4L 2017-2019 ၁၀.၂၅ လက်မ Android9Car Radio ဤယူနစ် A4L 2017-2019 Android9Car Radio မှ Apple Car Play, Android Auto, DSP, DAB + ကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။ iantရာမ ၁၀.၂၅ လက်မ anti-glare IPS ဒီဂျစ်တယ် touchscreen...
Audi TT ကို Android system ကို ဦး ခေါင်းယူနစ်
Audi A4 android9ကားရေဒီယို
Audi A3 အတွက် Android ကား DVD player
A4 အတွက် Din Android 9.0 Car Stereo ကိုနှစ်ဆတိုးနိုင်သည်
A4 အတွက် Din Android 9.0 Car Stereo ကိုနှစ်ဆတိုးနိုင်သည် ဒီ A4 အတွက်နှစ်ဆ Din Android 9.0 ဟာပိုမိုမြန်ဆန်ချောမွေ့ပြီးကြာရှည်ခံပါတယ်။ Android 9.0 operating system နဲ့ octa-core CPU ပရိုဆက်ဆာကထောက်ပံ့ပြီးတပ်ဆင်ပြီးနောက် boot တက်ဖို့ ၁...
A3 အတွက် Android Infotainment System Car Stereo
A3 အတွက် Klyde Android Infotainment System Car Stereo ဒီ A3 အတွက် Android 9.0 Car DVD မှာကင်မရာထည့်သွင်းဖို့ USB port တစ်ခုပါရှိပါတယ်။ ကင်မရာမပါဝင်ပါဘူး A3 အတွက်ဒီ Klyde Android 9.0 Car DVD ကို Octa-Core...
A3 ကားကိုအော်တိုမာလ်တီမီဒီယာ DVD player
A3 ကားကိုအော်တိုမာလ်တီမီဒီယာ DVD player အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း 1. A3 ကားကိုအော်တိုမာလ်တီမီဒီယာ DVD player များ၏သတ်မှတ်ချက်များနေသောခေါင်းစဉ်: HD ကိုမျက်နှာပြင်: 1024 * 600 OS ကို: အန်းဒရွိုက် 9.0 စနစ်က CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8-core ပင်မ...
A4 ကားတစ်စီးအော်တိုမာလ်တီမီဒီယာ DVD player
A4 ကားတစ်စီးအော်တိုမာလ်တီမီဒီယာ DVD player 1. A4 ကားတစ်စီးအော်တိုမာလ်တီမီဒီယာ DVD player များအတွက်ဒီမော်ဒယ် ယခုကအရမ်းတည်ငြိမ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ OEM ဝန်ဆောင်မှုလက်ခံပါ။ သင်ကလိုဂို, ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် UI ကိုအဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းကိုသုံးနိုင်သည်။...
Audi A4 2002-2008 ဘို့ဟာ android ကားတစ်စီးအသံဖိုင်
Audi A4 2002-2008 များအတွက် Android ကိုကားတစ်စီးအသံဖိုင် ဤသည် Audi A4 ထောက်ခံမှုဘလူးတုသ်ခေါ်ဆိုခ / အသံပြဇာတ်များအတွက်ယူနစ်ဟာ android ကားတစ်စီးအသံ, Sync ကိုဖုန်းစာအုပ်, ပြင်ပမိုက်ခရိုဖုန်း။ .1080P HD ဗီဒီယို, subwoofer အသံထုတ်လုပ်မှုနှင့် EQ...
Audi A3 2006-2013 များအတွက် 2din ကားတစ်စီးအသံဖိုင်
Audi A3 2006-2013 များအတွက် 2din ကားတစ်စီးအသံဖိုင် ဤသည်ယူနစ် Audi A3 ထောက်ခံမှုဘလူးတုသ်ခေါ်ဆိုခ / အသံကစားဘို့ကားတစ်စီးအသံ, Sync ကိုဖုန်းစာအုပ်, ပြင်ပမိုက်ခရိုဖုန်း 2din ။ ဒုတိယအကြိမ် Audi A3 ထောက်ခံမှု 1 စက္ကန့်အစာရှောင်ခြင်း Boot...
Audi A3 များအတွက် Android မှာ 8.0 ကားတစ်စီးစတီရီယို
Audi A3 များအတွက် Android မှာ 8.0 ကားတစ်စီး DVD 1) ကို Android 8.0, CPU ကို: Rockchip PX5 Octa Core, ရမ်: 4GB 2) subwoofer အသံ output ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်နှင့် separately.Screen ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုထိန်းချုပ်ဖို့: သင်ကဒီယူနစ်ပေါ် mirror...
Audi TT 2006-2013 များအတွက် oem မာလ်တီမီဒီယာ
Audi TT 2006-2013 များအတွက် Android မှာ 8.0 PX5 oem မာလ်တီမီဒီယာ 1. Navigation အွန်လိုင်း, အော့ဖ်လိုင်းမြေပုံသုံးပြီးသို့မဟုတ်မြေပုံကဒ်ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်လွယ်ကူစွာအောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာလျင်မြန်စွာ Google Maps ကို, Waze...
Audi A4 2002-2008 များအတွက် oem ရေဒီယို
Audi A4 2002-2008 များအတွက် Android မှာ 8.0 PX5 oem ရေဒီယို 1. အမျှမကြာမီသင်တစ်ဦးအညွှန်းယူနစ်ဒီဇိုင်းစဉ်းစားနေကြသည်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းအဖွဲ့အားလုံးလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းကိုသင်ကူညီပါလိမ့်မယ်။...
Audi A3 2003-2013 ဘို့ကားတစ်စီးရေဒီယိုခေါင်းကိုယူနစ်
Audi A3 2003-2013 များအတွက် Android မှာ 8.0 PX5 ကားတစ်စီးရေဒီယိုခေါင်းကိုယူနစ် အဆိုပါ Klyde DAB + ရေဒီယို receiver အတူ 1. ကိုသင်သာလွန် CD-တူသောအသံအရည်အသွေးနှင့်အတူသင်အကြိုက်ဆုံးဒီဂျစ်တယ်အသံထုတ်လွှင့်ရေဒီယိုလိုင်းများကိုပိုမိုခံစားနိုင်။ (မှတ်ချက်:...
octa Core 2GB RAM ကို 16GB ROM ကို Audi A3
octa Core 2GB RAM ကို 16GB ROM ကို Audi A3 1. ကြှနျုပျတို့အရည်အသွေးကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်စသည်တို့ကိုကားတစ်စီး DVD player / ကားတစ်စီးရေဒီယို / ကားတစ်စီး GPS navigation ၏ထုတ်လုပ်သူ Octa Core 2GB RAM ကို 16GB ROM ကို Audi A3...
octa Core 2GB RAM ကို 16GB ROM ကို Audi A4
octa Core 2GB RAM ကို 16GB ROM ကို Audi A4 1. Octa Core 2GB RAM ကို 16GB ROM ကို Audi A4 ယခုအလွန်တည်ငြိမ်ပြီးသည်ဤပုံစံ။ ကျနော်တို့ OEM ဝန်ဆောင်မှုလက်ခံပါ။ သင်ကလိုဂို, ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် UI ကိုအဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒီ Octa Core...
Audi A4 သည်ကားတစ်စီးကို DVD Player ကို
Audi A4 သည်ကားတစ်စီးကို DVD Player ကို android ဖုန်းနှင့် wince ကားကို DVD Player ကိုအပါအဝင် Audi A4 သည် 1.Car DVD ကို Player ကို, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက်7နှစ်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကျနော်တို့, ဂျပန်, ရုရှား,...
အန်းဒရွိုက် 7.1 Audi TT မာလ်တီမီဒီယာစနစ်များ
အန်းဒရွိုက် 7.1 Audi TT မာလ်တီမီဒီယာစနစ်များ 1.We အကြောင်းကိုသန်း 20 ရောင်းချကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးကောင်းစျေးကွက်အားဖြင့်သက်သေပြနေသည်စသည်တို့ကိုကားတစ်စီး DVD player / ကားတစ်စီးရေဒီယို / ကားတစ်စီး GPS navigation...
အန်းဒရွိုက် 7.1 Audi A4 ကားအသံ Navigation
အန်းဒရွိုက် 7.1 Audi A4 ကားအသံ Navigation 1.We အကြောင်းကိုသန်း 20 ရောင်းချကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးကောင်းစျေးကွက်အားဖြင့်သက်သေပြနေသည်စသည်တို့ကိုကားတစ်စီး DVD player / ကားတစ်စီးရေဒီယို / ကားတစ်စီး GPS navigation...
Audi TT 2006-2013 ကားကို DVD Player ကို
ထုပ်ပိုး: 3.5KGS / 265 * 255 * 185MM / ဆုကြေးဇူးကို box ကို Set
Audi TT 2006-2013 ကားကို DVD Player ကို 1.Audi TT 2006-2013 ကားကို DVD Player ကိုဟာ android အပါအဝင်ခြင်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက်7နှစ်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကျနော်တို့ဂျပန်, ရုရှား,...
Audi TT7လက်မကားအသံအီလက်ထရောနစ်
Audi TT7လက်မကားအသံအီလက်ထရောနစ် 1.We အကြောင်းကိုသန်း 20 ရောင်းချကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးကောင်းစျေးကွက်အားဖြင့်သက်သေပြနေသည်စသည်တို့ကိုကားတစ်စီး DVD player / ကားတစ်စီးရေဒီယို / ကားတစ်စီး GPS navigation ၏ထုတ်လုပ်သူအဆိုပါထုတ်ကုန်အမျိုးအစားအဖုံးတိုယိုတာ,...
တရုတ်နိုင်ငံ Audi ရဲ့အန်းဒရွိုက်ကား DVD Player ကို ပေးသွင်း
ဒီကား DVD player ထောက်ခံမှုဂျီပီအက်စ်အညွှန်း (ကား DVD အညွှန်းစနစ်ဖြင့်), အကောင်းဆုံးရေဒီယို, မှန် link ကို function ကို, OBD, 3G WIFI, ဘလူးတုသ်, DAB, ဗီဒီယိုက MP3 ။
ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောအခမဲ့အွန်လိုင်းမြေပုံနှင့်အတူ: သင်ထိုကဲ့သို့သောအခမဲ့များအတွက် Google မြေပုံ IGO, Sygic နှင့် Waze အားမြေပုံအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအွန်လိုင်းမြေပုံများအားအလွယ်တကူဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Google ကမြေပုံနှင့်အတူ, သင်အရှိဆုံးတိကျမှုနှင့်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်လမ်းကြောင်းများ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအသွားအလာဒေတာနှင့်ပိုပြီးရနိုင်။ သင့်ရဲ့လမ်းတစ်ဝှမ်းပိုမြန်လွယ်ကူမည်သည့်အခါမျှရှာပါ။
လွယ်ကူသော-connected အင်္ဂါရပ်ကိုထောကျပံ့: android စမတ်ဖုန်းနှင့် devices များနှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့, အလွယ်ကူသော-connected အင်္ဂါရပ်သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းများနှင့်ကားကိုဦးခေါင်း uni အကြားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်မှုနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာလိုအပ်သည့်အပိုမရှိဆော့ဗ်ဝဲနဲ့, ကို USB မှတဆင့် uni ရန်သင့်စမတ်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်တွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Audi ရဲ့အန်းဒရွိုက်ကား DVD Audi A3 ကို Android မော်တော်ကား DVD Audi TT အန်းဒရွိုက်ကား DVD Audi A4 အန်းဒရွိုက်ကား DVD Ford ကားအန်းဒရွိုက်ကား DVD